Vanokwikwidza vezvematongerwo enyika vanogashira madhora mazana maviri nemazana mapfumbamwe mukushambadzira mahara kubva kuFreeSpace Social, Inc.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Vanokwikwidza vezvematongerwo enyika vanogashira madhora mazana maviri nemazana mapfumbamwe mukushambadzira mahara kubva kuFreeSpace Social, Inc.
FreeSpace Yemagariro iri kuzivisa kuti ivo vachapa madhora mazana maviri nemazana mapfumbamwe mukushambadzira kwemahara kune wese akaziviswa musarudzo yemubatanidzwa wezvematongerwo enyika anojoinha pachikuva, semubhadharo wemutsa, zvisinei nebato.
Vanokwikwidza vezvematongerwo enyika vanokodzera mukana wese unowanikwa kuti vape meseji yavo kuruzhinji pasina mitemo yakaoma pakushambadzira kwezvematongerwo enyika kunoenderana nehukama hwevanhu. FreeSpace inoshandisa mhando ine hunyoro asi yakasimba, pamwe nekumiswa kweakaundi kumanikidzwa kune ese marudzi ezvinyadzo kana zvisina kukodzera zvemukati. Nekudaro, iyo kambani inoratidzira yakatenderedza danho kupfuura vamwe vayo veBig Tech kana zvasvika pakushambadzira, kunyanya mamwe maitiro ehutano, mapoka ezvitendero, masangano ekutengesa vanhu, uye bi-bato rezvematongerwo enyika.
Vakaziviswa musarudzo vanoshuvira kutora chikamu mune yemahara kushambadzira kupihwa paFreeSpace vanozodikanwa kuendesa kopi yavo FEC yekuzivisa fomu kuti vakwanise. Vakaziviswa Vanokwikwidza vanozoitawo yavo FreeSpace mbiri pakarepo kusimbiswa pavanogamuchira uye kubvumidzwa kweiyo FEC fomu.
"Tinogamuchira vavhoterwa kubva mumapato ese ezvematongerwo enyika kuti vatore mukana wekushambadzira kwepachena papuratifomu yedu," akadaro FreeSpace CEO, Jon Willis. "Tinotarisira kuti izvi zvichabvumidza ruzhinji rwune ruzivo pamusoro pevachakwikwidza vanoenderana netsika dzenzvimbo dzavanogara."